Lightread: mpamaky RSS tsara ho an'i Google Reader | Avy amin'ny Linux
Farany dia nivaly ny vavako. Te hanana fampiharana hamaky ny lahatsoratro foana aho Google Reader, fa tsara tarehy, tsotra ary mandeha tsara izy io, ary na dia nahazo izany aza aho Alternative hafa, tsy misy oharina amin'ny LightRead.
Miaraka amin'ny interface tsara mitovy OS X, ny fampiharana dia manana famaranana tena kanto ary mampiseho amintsika ny fampahalalana ilaina rehetra. Izy io dia mandamina ny zava-drehetra arak'izay lahatahiry ao googlereader, Ary sahala amin'ity iray ity dia afaka misafidy na mitahiry entana ho ankafizintsika isika. Ny ratsy? Eny, amin'ny teny anglisy ihany no misy azy io izao, ary tsy azoko apetraka ao DebianAnkoatra izany, tsy misy hafa.
Lreadread manana fampidirana miaraka amin'i Unity, mamela anao hamaky ny fidirana an-tserasera, mampiseho fampandrenesana, hitsin-dàlana amin'ny keyboard ary mamela, ankoatry ny zavatra hafa, hanonitra ny RSS anay. Raha hametraka azy dia tsy maintsy ampidirintsika ao anaty rakitra /etc/apt/sources.list ny andalana:
Vaovao farany ary apetaho amin'ny anarany ny fonosana.
Hita ao: @OMGUbuntu
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Lightread: mpamaky RSS tsara ho an'i Google Reader
mxprm dia hoy izy:
FML, maninona raha any Debian? = (
Mamaly an'i mxprm
Eny satria mila fiankinan-doha amin'ny Unity izay ao Debian, mazava ho azy, tsy ¬¬ izy ireo
Ity fampiharana ity dia tsy mila Unity hiasa.
@mxprm, vao noforonina ity fampiharana ity. Manoro hevitra anao aho handeha tracker bibikely avy amin'ny Lightread ary mangataha ny mpanoratra (na mpilatsaka an-tsitrapo) hanome fonosana ho an'i Debian.
Vao avy nandefa lahatsoratra momba ny fametrahana azy amin'ny Debian Testing izahay 😀
Izaho dia nitady mpanjifa mendrika an'i Google Reader nandritra ny taona maro ary tsy nahita na inona na inona (ReadAir no nampiasako, saingy nilaozana izy tamin'ny 2008 ary manana bibikely mahasosotra); Ary ankehitriny, rehefa nilavo lefona nandritra ny fotoana ela aho ary zatra ny mamaky fahana avy amin'ny tranonkala, dia tonga tsy ho avy ary miseho. ¬¬
Andraso ny hahatongavako any amin'ny repo Arch na ny AUR mba hahitana hoe manao ahoana izany.
Tsara ny manamarika fa ity fampiharana ity dia novolavolaina ho an'ny fifaninanana Ubuntu, "App Showdown". Ianao ihany no mila manala ny fiankinan-doha amin'ny launchpad-fampidirana (izay hesorina amin'ny trano fitehirizana ho an'ny Quantal Quetzal) ary mpilatsaka an-tsitrapo iray hametaka izany ho an'ny Arch.
mAD (@madlotus) dia hoy izy:
Mahafinaritra! Manantena zavatra mitovy amin'izany amin'ny Linux aho! http://is.gd/Pnxpnp
Mamaly an'i mAD (@madlotus)
Mike Juarez dia hoy izy:
Tena tsara tarehy !!
Valiny tamin'i Mike Juárez
kha0sa0s dia hoy izy:
Tena mpamaky mahafinaritra izy, indrindra ho an'ireo toa ahy izay zatra mametra-pialana famakiana feed amin'ny alàlan'ny tranonkala.
Amin'izao fotoana izao anefa dia manana olana kely nefa somary manelingelina izy: tsy mamerina ny kaontera amin'ny vaovao mbola tsy novakiana. Ao amin'ny Launchpad dia voasoratra anarana ny bibikely.
Salama. Bilaogy mahaliana tokoa ity.
Mamaly an'i kha0sa0s
fampahalalana tena tsara, mampiasa ny akregator xD aho izao, satria tsy te hiankina amin'ny vokatra google aho ary mampiasa ny chromium koa hehe, ankehitriny inona
._. Notapahiko ny hevitro, ny tiako hotohizana dia izao fa izao no tena mety ampiasaina raha zavatra an-tserasera toa ny mpamaky Google izay raha Google manodinkodina ny kaonty gmail-nao mba hahafahanao hamoy ny zava-drehetra dia efa nitranga tamin'ny maro tamin'ny namana satria G nanakana ny kaontiny: - /. sa azo antoka kokoa ve ny mampiasa zavatra ivelan'ny Internet toa ny mpamaky feed desktop? izany no iray amin'ny antony ampiasako akregator betsaka kokoa noho ny mpamaky G
Ny tena marina dia, tena kanto tokoa izy, tiako ny LightRead 🙂
zulander dia hoy izy:
Te hanandrana aho fa tsy afaka mametraka azy, tsy mety amiko, mety misy mametraka azy ve? Azonao zaraina ve ny rakitra .deb na ny kaody feno hametrahana azy? 🙂
Valio i zzulander
Efa nametraka azy aho, zahao tsara ilay boky nosoratan'izy ireo teto, misaotra .. mahafinaritra be
Mangataka anarana vaovao ny Community Mandriva